Roobabkii guga oo ka da,ay degmada Buuhoodle iyo meelo badan oo ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag.
Soomaaliya oo korka laga sawiray.
Laascaanood,Somalia,26 mar 2003—Roobabkii guga ayaa ka curtay meelo badan oo ka mid ah gobolada waqooyi iyo bari ee dalka Soomaaliya.
Roobabkaas ayaa ka da,ay meelo badan oo ay ka mid yihiin degmada Buuhoodle iyo meelo kale oo dhinaca hawdka ah,roobabkaas oo ilaa shalay iyo xalay marba meel laga soo sheegayey inuu biyo dhigay ayaan wax dhaawac ah u geysan dadka iyo duunyada toona.Magaalada Laascaanood ayaa waxaa ka da,ay roob teel teel ah,dhinaca gobolka Sanaag waxaa laga soo sheegay in roobabku ka da,een meelo badan,balse dadka qiyaasa cimilada ee deegaankaas ku sugan ayaa tilmaamay in rajadu fiican tahay oo ay filayaan in gugani noqdo mid lagu liibaano.
Roobabkan ayaa ku soo beegmay wakhti aad loo baqayey oo ay deegaanada qaar soo mareen jiilaal aad u adag ayna dadka iyo xooluhu soo wajahday biyo la�aan aad u daran.
Kooxda Maxamed Dheere ee maamusha Jowhar ayaa qiratay inay iyagu dhiibeen ninkii Yamaniga ahaa.
Muqdisho,Somalia,26 MAR 2003 —Maamulka Maxamuud Dheere ee degmada Jowhar ayaa markii ugu horeysey qirtay inay iyagu ka danbeeyeen ninkii Yamaniga ahaa ee loo dhiibay ciidamada booliiska ee Kenya.
Salaad Cali Jeelle, oo ah ninka ku xigeenka u ah Maxamed Dheere ayaa sheegay mar uu wariyayaasha la hadlayey in qabashada ninkan la qabtay ay qayb ka tahay la dagaalanka waxa uu ugu yeedhay "terrorism" ama argagixisada.
Mr Jeelle ayaa sheegay in rag badan oo ka tirsan dawlada ku meelgaadhka ahi ay ka tirsan yihiin ururada argagixisada,isagoo weliba tilmaamay in xaafada dhinaca galbeedka magaalada Muqdsiho ay ku badan yihiin nimanka argagixisada ahi .
Salaad Cali Jeelle, ayaa mar la weydiiyey bal inay hayaan wax cadaynaya in ninkaas ay dhiibeen in uu ka mid yahay kooxaha argagixisada iyo in kale,waxa uu Mr Jeele sheegay in ninkaas niman dablay ay isku dayeen inay afduubtaan,halkaasna uu ka soo gaadhay dhaawac kelifay in ninkaas la keeno isbitaalka Keysaney,kadibna waxa gacanta ku dhigay ninkaas ciidamadaya oo ka soo qaaday isbitaalka.
Mr Jelle ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu ay gacanta ku dhigi doonaan nin kasta oo ajnabi ah oo tuhun ka galo.
Arintan ayaa abuurtay in dad badan oo ganacsta ah oo soomaaliya booqasho ganacsi ku jooga inay cabsi gasho.
Maleeshiyada Max�ed Cumar Xabeeb (M/dheere) ee ku sugan gobolka Sh/dhexe ayaa 19 mar ee sanadkan waxay xireen wadada gasha isbitalka Keysaney ee ku yaala duleedka Waqooyiga Muqdisho,waxayna gacanta ku dhigeen nin Yemani ah oo ahaa ganacsade in mudo ah joogay magaalada Muqdisho ayna dabley soo afduubatay uga reebeen maleeshiyo ka tirsan ciidanka booliska uuna hogaaminayay Ibraahim Shaaweeye agagaarka Ex. Kontorool Balcad dhaawac ahaana ninkaasi loo geeyay isbitaalka Keysaney ayey kooxda Max�ed dheere u gacan geliyeen ninkaasi sida laga aaminsan yahay magaalada Muqdisho saraakiil Israel ah kuwaasoo ninkii Yemaniga ahaa ku qaatay dayuurad ay wateen, waxayna warar ku dhow dhow halka uu ka dhacay falkaasi sheegayaan in maleeshiyada Max�ed dheere ay ninkaasi u haysteen in uu ka tirsan ururka Al-Qaacida sidaasna ugu gacan geliyeen saraakiisha Mareykanka.